နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု - မိုက်ကရိုဖုန်း optoelectronics Co. , Ltd မှ
အဆုံးမဲ့စိတ်ကူးယဉ်အာကာသရောက်စေဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလင်းရောင်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေ LED, LED အလင်းရောင် applications များကို LED, မဟာဗျူဟာ Unlimited စာရင်းဇယားဖို့မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင် applications.According ဖို့အတိတ်ထဲကနေခုန်ဖို့လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းကျော် LED မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရပါလိမ့်မယ်ပြင်ပရှိ အဆတိုးတက်မှုနှုန်း trend.In 2011, ခန့်မှန်းချက်အရသိရသည်က output အထိသောင်းချီ dollars.Especially ဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ 2009 ခုနှစ်အီးယူအကောင်အထည်ဖော်အတွက်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မည်အက်ဒီဆင်တီထွင်ဆီမီးခွက်ပိတ်ပင်ထားနှင့်အများကြီးအာရုံစိုက်မှုစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှပေးဆောင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် အဆိုပါ LED မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်ထိုကဲ့သို့သောဝယ်လိုအား၏မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အဖြစ်အအေးနည်းပညာ, optical ဒီဇိုင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းဒီဇိုင်းအနေဖြင့်ကြီးမားသောစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အကောင်းမြင် outlook.Below မြင့်မားအာဏာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်၏လယ်ပြင်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို LED ။
အလင်းရောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ LED မြင့်သောအာဏာအမြင့်ဆုံးအာဏာကို LED အလင်းရောင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုဒြပ်စင်ပေါ်တွင်မူတည်: ကအပူ, optical, ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏နည်းပညာ, တစ်ခုဖြစ်သည် itself.2 တ chip ကိုဖြစ်ပါတယ်။
2 chip ကိုထောက်ခံကြောင်း
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, LED မီးချစ်ပ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဓိကသော့ချက်ရိုးရာပစ္စည်း, ဆီလီကွန်နှင့် silicon carbide ထံမှအခြေခံပစ္စည်းနှင့် epitaxial growth.Basal ပစ္စည်းများများ၏နည်းပညာ, ဇင့်အောက်ဆိုဒ်မှနီလာ, ထိုကဲ့သို့သောအဘို့ဂယ်လီယမ် nitride.Whether အဖြစ်အသစ်သောပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည် ဝဲအလင်းရောင်နှင့်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍ illume မြင့်သောအာဏာကို chip ကို, နည်းပညာအဆင့်မြှင့်သော့ချက်အပါအဝင်၏အကူအညီနှင့်အတူရုံနှစ်အနည်းငယ်ကပိုထိရောက်ပိုမိုတည်ငြိမ် chips.In ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်, အလှဆင်အလင်းရောင်နှင့်အချို့သောရိုးရှင်းတဲ့အရန်အလင်းရောင်နိမ့်ပါဝါကိုချစ်ပ်အသုံးပြုသည် chip ကိုဖွဲ့စည်းပုံ, မျက်နှာပြင် roughening ကုသမှုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများဆက်တိုက်၏မျိုးစုံကွမ်တမ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း, LED.Figure 1 photosynthetic ထိရောက်မှု၏လယ်ပြင်၌ကြီးသောအောင်မြင်မှုများရရှိ, ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ diagram.With ဟာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက် LED chip ကိုဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါသည် LED ကွမ်တမ်ထိရောက်မှု photosynthetic ထိရောက်မှု၏ LED ကို chip ကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်, နောက်ထပ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ထူးအိမ်သင်ရုပ်ရှင်ချစ်ပ်နည်းပညာ (ကိုတွေ့မြင်ရှေ့ကနေအလင်းကို output ကျော် 97% ကိုအသီးအသီးအခြမ်းအလင်း output ကို၏ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရောင်ပြန်၏အောက်ခြေတွင်ကိုသုံးနိုင်သည်, ထိုအစွန်းရောက်တောက်ပ LED ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကနည်းပညာ ကိန်းဂဏန်း 2) သိသိသာသာကို LED မီးလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းမှန်ဘီလူးပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုအဆင်သင့်အဆငျပွမှေုမြားကိုဖနျမသာသည့်။
3 Lamps နှင့်မီးအိမ်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ
အများပြည်သူမီးခွက်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှသတိထားရမှာခဲ့ပြီး lanterns.If ရုံမီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ installation များအတွက် LED အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးအနိမ့်အပူခုခံအပေါ်အားကိုးကောင်းတစ်အအေးစနစ်ကမရှိ, ထိထိရောက်ရောက် PN ကနေအပူခုခံမှုကိုလျှော့ချရမယ် ယင်း LED ၏ PN node ကိုအပူချိန်ကိုလျှော့ချဝန်ဆောင်မှု LED မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ဘဝနှင့်အောင်မြင်သောအလေ့အကျင့်ရှည်နှင့်သမားရိုးကျမီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အနေဖြင့်အမှန်တကယ် flux goals.Different တိုးတက်လာဖို့ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်သို့ node ကို, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပါဝါလေယာဉ်တင်သင်္ဘော LED ဖြစ်ပါတယ် လည်းအပူကိုသယ်ဆောင် LED ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အပူလွန်ကျူးတောင်နှင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ဒီဇိုင်းကိုအလွန် important.In ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည်, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ထုတ်လုပ်သူလည်းကဲ့သို့သောအပူလွန်ကျူးပစ္စည်း, အထူ, အရွယ်အစားနှင့်အပူလွန်ကျူးအချက်များ၏အရည်အသွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် interface နဲ့ချိတ်ဆက်မှု၏အပြောင်းအလဲနဲ့။
3.2 Optical ဒီဇိုင်း
ရိုးရာမီးခွက်နှင့်မီးအိမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ် directional နှင့်အမှတ်အလင်းအိမ်နဲ့ LED ၏အရှိဆုံးပုံမှန်နှစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပြီး, ဘယ်လို LED ၏နှစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာများ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏ optical ဒီဇိုင်း၏သော့ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်တောက်ပတဲ့ဖြစ်သည့် LED ၏ဒွိဖန်မျှင်ဒီဇိုင်းမှတဆင့်မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ဥပမာ curve.For ပိုကောင်းအလင်းဖြန့်ဖြူးအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် LED, အမိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်မီးခွက်၏ applications များနှင့်မီးအိမ်အလင်းလိုအပ်ကြောင်း, အလင်းကိုထုတ်ယူထိရောက်မှုတိုးတက်စေမယ့်မြင့်မားတဲ့အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းခေါင်းတိုင်ကိုသုံးနိုင်သည် .Or မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အလင်းဖြန့်ဖြူးတူညီနေမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်မသာ, မျက်နှာပြင်အလင်းရင်းမြစ်များအတွက် LED မီးပွိုင့်အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုပြောင်းမှသကဲ့သို့, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အလင်းလမ်းပြပန်းကန်၏နည်းပညာများကိုအသုံးချလည်း glare.In ထို့အပြင်တားဆီးနိုငျသညျ, အတွက် အခြို့သောအရန်အလင်းရောင်နှင့်လေယူလေသိမ်းအလင်းရောင် applications များ, အရာဝတ္ထုအလင်းနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံစိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလိုအပ်မှမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်စံပြ optical အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာအချို့ projection မှန်ဘီလူးနဲ့ရောင်ပြန်နှငျ့အသုံးပွုနိုငျသညျ။
3.3 Driven ဒီဇိုင်း
အဆိုပါ LED မီးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် LED drive ကိုလက်ရှိသေချာစေရန်, node ကိုဗို့အတွက်ဆွေမျိုးအပြောင်းအလဲများကအရမ်း small.Therefore ဖြစ်ပါသည်, ထို့အပြင် current.In စဉ်ဆက်မပြတ် LED ကို output ကိုသေချာစေရန်အခြေခံအားဖြင့်တန်းတူလျှပ်စစ်အလုပ်စီးဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ် output.When စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိဖို့ LED drive ကိုလက်ရှိကြောင်းအာမခံပေးရမည် , အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှုဒီဇိုင်းအလင်းရောင် application များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုလေထုမောင်းနှင်သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မတူညီသောအရောင်အဝါအဆင့်ဆင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အညီ, အပြည့်အဝစွမ်းအင် saving.At ပစ္စုပ္ပန်၏ရည်မှန်းချက်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်, ထိုမောင်းနှင်ဒီဇိုင်း၏အဓိကလမ်းကြောင်းသစ်အလေးပေး ထိန်းချုပ်မှုတိကျစွာအကောင်းဆုံး, အ drive ကို၏တန်ခိုးစားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် response.In ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်, ပါဝါအချက်တိုးတက်အောင်ပေါ်, power supply ၏ဒီဇိုင်းသည်ပုံနှိပ် circuit board ရဲ့အဆင်အပြင်နဲ့စီးရီး-အပြိုင်နည်းလမ်းများအားလုံးအချက်များဖြစ်ကြသည်ရပါမည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်။
4 အမြင့်ပါဝါ LED အလင်းရောင်နည်းပညာစိန်ခေါ်မှု
တောင်မှမိုးလုံလေလုံဝဲအလင်းရောင်နှင့်အလှဆင်အလင်းရောင် applications များကျေနပ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအလင်းရောင်နှင့်လေထုအလင်းရောင် applications များနေဆဲစတာတွေကနဦးကုန်ကျစရိတ်, အလင်း, အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်းများနှင့်စနစ်ကယုံကြည်စိတ်ချရ၏အနိမ့်အရောင်အပူချိန်, အပါအဝင်များစွာသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရအတွက် LED
နောက်ထပ်၏အစအဦးမှာ 4.1 ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ
ကုန်ကျစရိတ်အထူးသဖြင့် applications.Although LEDs မော်ဒယ်ပိုပိုပြီးအိမ်ထောင်စုအလင်းရောင်အတွက်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်အတွက်အတော်လေးထိခိုက်မခံတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, photosynthetic ထိရောက်မှုတိုးတက်ခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းမြင့်မားသည် LED အလင်းရင်းမြစ်များ၏စျေးနှုန်းလျှော့ချအခါနေဆဲ exists.But ပြဿနာ, ခြုံငုံစနစ်ကဒီဇိုင်း optimization, စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်စျေးကွက်အပေါ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွမ်းအင်ချွေတာချောင်းဆီမီးခွက် decline.Recall မည်, အကြောင်းကို $ 15 ပဲကုန်ကျ, $ ထို့ကြောင့်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်ရမည် 1.50.Can အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည် စျေးကွက်များနှင့်လိမ့်မည်မကြာမီလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်ဆင့်မှ LED မီးလုံး၏စျေးနှုန်း။
4.2 photosynthetic ထိရောက်မှု၏အနိမ့်သောအပူချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
လူတစ်ဦးမှထိုအချမ်းအအေး Bai Guangze, သန့်ရှင်းအကျိုးရှိစွာနှင့်တောက်ပခံစားမှုပိုမိုရုံးများအတွက်သင့်လျော်သောနှင့်ပြင်ပ lighting.Because ဖော့စဖရပ်, 4000 K သည်ကိုအောက်တွင်အနိမျ့အရောင်အပူချိန်ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးလုံလေလုံအိမ်မှာ lighting.Warm Bai Guangling တပြင်လုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုကပိုပူနွေးခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် အမှုန့်, LED မီးလုံး၏တဲ့အခါမှာအနိမ့်အရောင်အပူချိန်မြင့်မားအရောင်အပူချိန်ထက်များသောအားဖြင့် 30 ခန့်% နိမ့်။
4.3 photosynthetic ထိရောက်မှုနှင့်အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်းများစီမံခန့်ခွဲမှု
ယေဘုယျအားမြင့်မားသည့် LEDs တောက်ပထိရောက်မှုနှင့်အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်း lower.Indoor အလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်နိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအရာဝတ္ထု၏အရောင်အဝါများနှင့်အရောင်ဖော်ပြရန်နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမှတိုက်ရိုက်၏အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ရှောက်မည်, LED ကိုပိုမိုမြင့်မားအရောင်က rendering အညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်လိုအပ် ပြင်ပ landscape.Therefore, တစ်ချိန်တည်းမှာ LED မီးလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလည်းနောက်ထပ်နည်းလမ်း index.Another rendering အရောင်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏မျက်နှာပြင်ရှိအခြို့အနီရောင်အလင်း add ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 90 ကျော်။
မြင့်မားတဲ့လက်ရှိ drive ကိုထိရောက်မှုစဉ်အတွင်း 4.4
လောလောဆယ်ပုံမှန်အားဖြင့် 1 LED ကိုလက်ရှိ w 1000 mA.Under မြင့်သောလက်ရှိ drive ကိုမှ 350 Ma ထံမှတိုးလာနိုင်ပါသည် flux တိုးလာလျှင်ပင်, သို့သော်, ခြုံငုံထိရောက်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဟန်ချက်ညီမှုစနစ် photosynthetic ဖြစ်ရမည်, များသောအားဖြင့်အတော်လေးသိသာ decline.Therefore ဖြစ်ပါသည် အလွန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျော့ချသကဲ့သို့ efficiency.If ကျွန်ုပ်တို့သည်နဲ့ LED မီးလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုငျသညျ, မြင့်သောလက်ရှိ drive ကိုအောက်မှာရုံစနစ်၏မြင့်မားသောအလင်းထိရောက်မှုများကိုသေချာအောင်ဖြစ်ပါသည်, အလွန် LEDs ၏လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် LED ကိုထုပ်ပိုးအရွယ်အစားကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန် 4.5
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့, မိုးလုံလေလုံလည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှ LED ဟာကျဉ်း LED ကိုထုပ်ပိုးအရွယ်အစားမှတဆင့်ဤအအနုပညာအရည်အသွေး, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့် characteristics.And အပြင်, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် space.To လိုအပ် အရောင်က rendering တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာရောထွေးအလင်းရောင် applications များသုံးစွဲဖို့, သေးငယ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစားမျိုးစပ် optical မှန်ဘီလူးနှင့်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီပေးသည်။
4.6 စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်စေခြင်း, ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့ရန်
ယေဘုယျအားအလင်းရောင်ပလီကေးရှင်း, ခြုံငုံထိရောက်မှု LED, ဝန်ဆောင်မှုအသက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအသင်းတော်ကိုစနစ်၏မီးခွက်နှင့်မီးအိမ် ascend.Traditional မှစနစ် optimization မှတဆင့်သူဖြစ်ရမည်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, ပုံ3မှာပြထားတဲ့အတိုင်းမျိုးစုံအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သောအလင်းရောင် system ကို LED ။
LED အလင်းရင်းမြစ်: ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမြင့်မားထိရောက်မှု, အရောင်မျိုးစုံနဲ့ကနေရှေးခယျြဖို့ output power ကိုရှိပါတယ်။
ပါဝါကိုကူးပြောင်း: (AC) လက်ရှိပြောင်းပြောင်းလဲ, ဘက်ထရီနှင့်အခြားပါဝါကိုအကျိုးရှိစွာလုံခြုံအနိမ့်ဗို့အား, စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအာဏာကိုပေးဝေ။
ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်မောင်း: အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်သဘောပေါက်ကိုသုံးပါကလက်ရှိ drive ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစဉ်ဆက်မပြတ် LED ။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု: သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝန်ဆောင်မှုဘဝအောင်မြင်ရန်ချင်လျှင်, LED node ကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်, အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။
optical ဒြပ်စင်: မှန်ဘီလူး, ရောင်ပြန်, ဒါမှမဟုတ်လမ်းညွှန်ပန်းကန်ပစ္စည်းလိုအပ်သော optical ဒြပ်စင်များအတွက်ပစ်မှတ်ဧရိယာပေါ်အလင်းအာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
LED အလင်းရင်းမြစ်၏မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်အတွက်အသုံးပြု5မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်
ပြီးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ factor.Mr OSLON SSL ကို LED က osram opto တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်အရေးကြီးသော၎င်း၏အာဏာကိုပုံ4မှာပြသ 1 ဦးခန့် w.As, ထို LED ကိုအဓိကအားများအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်များ၏ LED အလင်းအရင်းအမြစ်ကို select ရန်ဖြစ်ပါသည် ယေဘုယျမိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်, မြင့်သောအာဏာကိုစီးဆင်းမှုအတွက် 100 ကျော် LM / w.Even ၏အထုပ်အရွယ်အစားက x3မီလီမီတာသာ3မီလီမီတာဖြစ်ပြီး, စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တောက်ပထိရောက်မှုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အများဆုံး photosynthetic ထိရောက်မှုကြောင့်လည်းလုပ်နိုင် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တောက်ပထိရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အရှင်ထိရောက်စွာမီးခွက်၏အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် lanterns.And မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် 80 & deg ရှိပါတယ်; Beam ကို Angle, ဒါကြောင့်ပြင်ပအလင်း projection lens.The ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့ရှိနိုင်ပါသည်လိုက်မီးထိုးသို့မဟုတ်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်, စားပွဲပေါ်မှာဆီမီးခွက်နှင့်မျက်နှာကျက် Omni LED စံပြအလင်းရင်းမြစ်။
အဲဒါကိုစားသုံးသူဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. solution.In အလွန်စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာအလင်းရောင်ဖန်တီးကူညီနိုင်အောင်မြင့်မားလက်ရှိနှင့်အတူထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန် LED မစ္စတာ OSLON SSL ကို LED ကအနာဂတ်အတွက် & အခြားဖြစ်လာသည်သောကြောင့်, လျှောက်လုံးအစိမ်းရောင် &; အလင်းအားလုံးဝိသေသလက္ခဏာများ source.The7ဋ / W သကဲ့သို့အနိမ့်အပူခုခံ LED, အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကပိုရိုးရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်, ကက်ဘိနက်၏အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်နာများခိုင်မာတဲ့အလင်းကိုသင်မလိုအပ် solution.If ရှုပ်ထွေးသိမ်မွေ့အလင်းရောင်ဖန်တီးပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘူးလုပ်နိုင်, ဖွစျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ယင်းစူပါအဖြူရောင်အလင်းနွေးအဖြူရောင်အလင်း၌ဗားရှင်း, ဖြူသောအလင်း (အရောင်အပူချိန် 5700 ~ 6500 K သည်ဖြစ်ပါသည်) (အရောင်အပူချိန် 2700 ~ 4500 K သည်ဖြစ်ပါတယ်) ဗားရှင်းမီးခွက်နှင့်မီးအိမ် collocation.In ထို့အပြင်အချို့နှင့်အတူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မစ္စတာ OSLON SSL ကို table ထဲမှာ 1.At ပစ္စုပ္ပန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်လက်ရှိ 350 ma, စူပါအဖြူရောင်အလင်း၏အလင်းအရင်းအမြစ် (အရောင်အပူချိန်အခါမြင့် photosynthetic efficiency.Mr OSLON SSL ကိုအဓိက parameters တွေကို LED သေချာ, နောက်ဆုံးပေါ် LED ကို chip ကိုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ် 5700 ၏ K နှင့် 6500 K) 110 LM သကဲ့သို့မြင့်မားသောပုံမှန်အရောင်အဝါ, အမြင့်ဆုံးတောက်ပ flux 130 lm.When ရောက်ရှိရန်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင် 350 ma နှင့်အရောင်အပူချိန် 3000 K သည်ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန် photosynthetic ထိရောက်မှု 75 LM / W, အရောင်အဝါကိုရောက်ရှိနိုင်သည်, 85 LM ကြည့်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင် 700 ma (နွေးအဖြူ), အရောင်အဝါ 155 LM ဖြစ်ပါသည်, ကိုလည်း LEDs ၏ပင်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလည်းအလင်းရောင်၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအောင်မြင်ရန်နိုငျသညျ, မြင့်သော photosynthetic ထိရောက်မှုထိနျးသိမျးနိုငျ, lumen ၏ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ခုသာ 15 LED မီးမောင်းထိုး (ပုံ5ကိုကြည့်ပါ) ဖြင့် 700 ma ၏ drive ကိုလက်ရှိ w ဒီဇိုင်းနိုငျသညျ, ထို LEDs ၏အရောင်အဝါ 1400 LM ရောက်ရှိနိုင်, ခုနစျပါးမစ္စတာ OSLON SSL ကို LED ကလိုအပ်တယ်နှင့်အရွယ်အစားအလွန် small.Depends ဖြစ်ပါသည် ရောင်ပြန်သို့မဟုတ်မှန်ဘီလူးတင်ဆောင်လာသော Beam ကို Angle, အလင်းထိရောက်မှုနေဆဲအလွန်အကောင့်သို့အပူလွန်ကျူးနဲ့ optical အရှုံးယူပြီးပြီးနောက် high.Even သည်နောက်ဆုံး flux ၏မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်အခါ, ထက်ပိုမို 1000 lm.In ထို့အပြင်နိုင်ပါတယ်; 80 & deg င်း၏အပေါ် သင်သည်မည်သည့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအရောင်အပူချိန်ရနိုင်, အရောင်ကိုလည်းအလွန်ဒီဇိုင်းကိုတိုးမြှင့်, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အပူချိန်နှင့်အရောင်က rendering အညွှန်းကိန်းလိုအပ်တယ်, ခုနစျပါးကြယ်ပွင့်ကို LED ကသာလူနည်းစုနွေးအဖြူသို့မဟုတ်အခြား monochromatic LED ကိုမစ္စတာ OSLON SSL.In အဖြစ်ဤနည်းဖြင့်အစားထိုးခံရကြလိမ့်မည် LED မီးလုံး၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
LED နည်းပညာ၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ LED အလင်းရောင်၏တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, လျှောက်လွှာ ပို. ပို. လေးနက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ပြတ်လပ်မှုပြဿနာ widely.With ပိုပိုပြီးလိမ့်မည်, အထူးသဖြင့်လူတွေကအတွက်နဲ့ LED ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာဖို့ ပို. ပို. အာရုံစိုက် LED အလင်းရောင်စျေးကွက်သည်ကို LED မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထို LED ကိုစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး, လူ့သဘောသဘာဝနှင့် art.And မှညှတျမည်, အက်ဒီဆင်တီထွင်ဆီမီးခွက်, အဖြိုက်နက်ဝိုင်ယာကြိုးဆီမီးခွက်နဲ့ချောင်းဆီမီးခွက်အလင်း source.In ထို့အပြင်များ၏အလားအလာကိုအစားထိုးပါလိမ့်မည် ပင်မြင့်မားတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက်မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်လျှောက်လွှာ, ကက x3မီလီမီတာ3မီလီမီတာမှထုပ်ပိုးအရွယ်အစားနှင့် w 100 ကျော် LM / များ၏တည်ငြိမ်ပြီး performance.Its အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအများဆုံး photosynthetic ထိရောက်မှုသာ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ OSLON SSL ကို LED ကမစ္စတာ, စီးဆင်းမှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလင်းထိရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထိရောက်စွာမီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်; ထို့အပြင်ကြောင့်ယင်း၏ 80 & deg ၏; အလင်းရောင်ခြည်ရ Angle, ဒါဏချင်ပါတယ် utside မှန်ဘီလူးသို့မဟုတ် reflector.In တိုတောင်းပေါ်သို့ projected မစ္စတာ OSLON SSL ကိုမိုးလုံလေလုံ LED မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်စံအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။